Neymar oo la dagaallamaya fadeexad culus oo soo wajahday | WAJAALE NEWS
June 2, 2019 - Written by Reporter:
Xiddiga kubadda cagta ee dalka Brazil Neymar Jr ayaa beenisay eedeyn la xidhiidha inuu haweeney kufsi ugu geystay magaalada Paris.
Neymar ayaa isagoo isku dayaya inuu caddeeyo inaanu wax khalad ah sameynin waxa uu baraha bulshada soo dhigay wax uu ku sheegay qoraalladii ay Whatsapp-ka isku weydaarsadeen isaga iyo haweeneydaas.
Maxay tahay eedeyntu?
Sida ku xusan xogta booliska, haweeneyda oo aan magaceeda la shaacinin ayaa Neymar ka baratay barta lagu xidhiidho ee Instagram-ka, wuxuuna ka codsaday inay ku kulmaan magaalada Paris.
“Markii ay wada hadleen oo ay ismaandhaafeen, Neymar wuu xanaaqay, wuxuuna sameeyay qalalaase, isagoo damcay inuu xidhiidh jinsi la sameeyo haweeneyda oo aan raalli ka ahayn”, ayaa lagu yidhi qoraalka booliska.
Bayaan ay eedeynta ka dib soo saareen kooxda maamulka u ah ciyaartoyga ayey ku cambaareeyeen sheegashada ‘been abuurka ah’ ee lagu fadeexeeyay Neymar, waxayna aad uga cadhoodeen arrinta foosha xun ee warbaahinta lagu shaaciyay.
Neymar aabihii oo lagu magacaabo Neymar dos Santos ayaa sidoo kale gaashaanka ku dhuftay eedeymahan, wuxuuna sheegay inay iska caddahay in arrintani ay tahay dabin.
Weeraryahanka kooxda PSG ayaa hore looga xayuubiyay kabtan nimada xulka qaranka Brazil, tallaabadaas oo qeyb ka ahayd ciqaab dhinaca anshaxa ah oo dhawaan la marsiinayay.
Dhanka kale, mas’uuliyiinta xidhiidhka kubadda cagta ee dalka Faransiiska ayaa xiddigan ka mamnuucay saddex ciyaarood, ka dib markii uu feedh ku dhuftay qof taageere ah, markii kooxdiisa ay bishii lasoo dhaafay guul darro qadhaadh kala kulantay kooxda Rennes oo ay la ciyaarayeen fiinaalka tartanka Coupe de France.
Neymar ayaa talaadadii Tababarka laga joojiyay markii uu jilibka ka gaadhay dhaawac fudud, lamana xaqiijinin inuu saameyn ku yeelan karo ciyaaritaanka tartanka iyo inkale.